Hamba uye ePraia 2, izinyathelo ukusuka ebhishi laseCampeche!
Indlu iyizinyathelo nje ukusuka ogwini, eduze kwesikhumulo sezindiza (14km), impilo yasebusuku kanye nezithuthi zomphakathi. Ilungele imibhangqwana, abahambi bebhizinisi nemindeni (enezingane).
Isayithi liqukethe amaKitnets amabili, uma ufuna ukwazi elinye, yiya ku:
Indlu ine-air conditioning (kuyashisa/kubanda), isitofu esinama-mbawula amabili, ifriji, i-microwave, i-electric sandwich maker, izinto zasekhishini, izitsha nezinto zokusika. 32 intshi smart tv. Izihlalo ezimbili zasebhishi kanye nesambulela. Iphinde ibe ne-inthanethi engenantambo.
Kukhona isitobhi sebhasi esingamamitha ayi-150 ukusuka endlini, kukhona nemakethe encane ecishe ibe ngamamitha angama-450 futhi cishe amamitha ayi-1500 kunezimakethe ezimbalwa, amakhemisi, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela, imitholampilo yezokwelapha, izitolo zezikhumbuzo kanye nohwebo olujwayelekile. Izimakethe eziningi ziletha igrosa ekhaya lakho.
Ibhishi laseCampeche lisempumalanga yesiqhingi saseFlorianópolis, phakathi kolwandle lwaseJoaquina nolwandle lwaseMorro das Pedras. Ngaphambi kwakho kunesiqhingi saseCampeche.